तपाइँको फोन रातभर चार्ज गर्दा के हुन्छ होला, कुनै खतरा त छैन | Khabar Sadan खबर सदन
Home ज्ञानज्ञुनकाहरू कुरा तपाइँको फोन रातभर चार्ज गर्दा के हुन्छ होला, कुनै खतरा त छैन
त्यहाँ सेल फोन ब्याट्री को बारे मा धेरै प्रश्नहरु छन्। के तपाईंले आफ्नो स्मार्टफोनहरू रातारातमा प्लग छोड्नुहुन्छ? के यो फोनको लागि खराब छ? तपाइँको सुरक्षा को लागी नराम्रो? सही गर्नु पर्ने कुरा के हो?
वास्तवमा तपाईले आफ्नो फोन कति चार्ज गर्नु पर्छ? प्लग इन गर्न सही समय कहिले हो? के यो प्रत्येक पटक शून्यमा जान्छ? १००% सम्म? तपाइँ कसरी स्मार्टफोन भित्रको ब्याट्रीबाट सबैभन्दा लामो जीवन प्राप्त गर्नुहुन्छ? के यसले वास्तवमै फरक पार्छ यदि तपाइँ अपग्रेड हुनुभन्दा पहिले केहि वर्षको लागि ह्यान्डसेटलाई वरिपरि राख्नु भएको छ?
बहस एक उपकरणलाई मध्यम हानि को चिन्ता बाहिर राम्रोसँग जान्छ, किनकि केही मानिसहरूलाई स्मार्टफोनको ब्याट्री को डर छ। यो चिन्ता तुलनात्मक रुपमा उचित देखिन्छ किनकि केही वर्ष अघि मात्र सैमसंगको ग्यालेक्सी नोट ब्याट्री मुद्दाहरूको कारण फ्लेममा फस्दै थियो। तर हामीले पहिले वर्णन गरिसक्यौं, जबसम्म त्यस उपकरणमा केही गम्भीर निर्माण त्रुटिहरू भएन जबसम्म त्यस फोनले गर्‍दैन, फायर-इन-तपाईंको पकेट (वा नाइटस्ट्यान्डमा) पक्ष असम्भव छ।
समस्या केहि अनुसन्धान र त्यहाँ राय विचार विरोध गर्दै छन्। हामीले सकेसम्म राम्रो गर्न को लागि सही र गलत चीजहरू संकुचित गरेका छौं। हामी तपाईंलाई मिथकहरू र सत्यहरू आइफोन वा एन्ड्रोइड फोन चार्जिंगका लागि प्रस्तुत गर्दछौं, विशेष गरी जब राति प्लग इन गर्दा।
एउटा कुरा सबै विशेषज्ञहरु मा सहमत छ कि स्मार्टफोन पर्याप्त स्मार्ट छ कि तिनीहरूले एक अधिभार हुन छैन। भित्र थप सुरक्षा चिपहरू निश्चित गर्नुहोस् कि ट्याब्लेट वा स्मार्टफोन वा एक ल्यापटपमा हुन सक्दैन। एक पटक आन्तरिक लिथियम-आयन ब्याट्रीले यसको क्षमताको १००% हिट गर्‍यो, चार्ज गर्न बन्द हुन्छ। यदि तपाईं रातारातमा प्लगइन छोड्नुहुन्छ भने, यसले ९९% सम्म झर्दा हरेक समय ब्याट्रीमा नयाँ जुस ट्रिक गर्दै ऊर्जाको अलि प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो तपाईंको फोनको जीवनकालमा खाँदै छ।
Previous articleआँफैले लगाएको नियम परिवर्तन गर्दै सरकार, बिहानैबाट काठमाण्डौमा ब्यापक परिवर्तन
Next articleटेकुस्थित फोहोरमैला संकलन केन्द्रमा आगलागी भएको
काठमाण्डाै गएकाे वैशाख १६ गतेदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाको स्वरूप (माेडालिटी) मा परिवर्तन भएको छ । आज बुधवार काठमाण्डाै उपत्यका (काठमाण्डाै, ललितपुर र भक्तपुर) का...